पीएसएलः सन्दीपले ४ ओभरमा १० रन खर्चिएर ४ विकेट लिए ! - Everest Dainik - News from Nepal
पीएसएलः सन्दीपले ४ ओभरमा १० रन खर्चिएर ४ विकेट लिए !
काठमाडौं, फागुन १६ । यूएईमा भइरहेको पाकिस्तान सुपर लिग (पीएसएल) अन्तर्गत लाहोर कलन्दर्समा आवद्ध नेपाली लेग स्पिनर सन्दीप लामिछानेले क्वेटा ग्लेडियेटर्सविरुद्धको खेलमा शानदार प्रदर्शन गरेका छन् । उनले ४ ओभर बलिङ गर्दै १० रन खर्चिएर ४ विकेट लिएका छन् ।
याे पनि पढ्नुस पीएसएलः लाहोर ब्याटिङ गर्दै, अन्तिम खेलमा को–कोले पाए मौका?
सन्दीपले पहिलो ओभरमा शेन वाट्सन, दोस्रो ओभरमा रिले रोस्वो, उमर अकमल र तेस्रो ओभरमा डानिस आजिजलाई आउट गर्न सफल भए । उनले अन्तिम ओभरमा मात्र विकेट लिन सकेनन् ।
सन्दीपले आजको खेलसँगै पीएसएलमा ८ विकेट लिइसकेका छन् । सन्दीपले पहिलो खेलमा महत्वपूर्ण ३ र दोस्रो खेलमा एक विकेट लिएका थिए ।ग्लेडियेटर्सले ५ खेल खेलकोमा ४ खेलमा जीत र एक खेलमा हार बेहोर्दै ८ अंकका साथ शीर्ष स्थानमा छ । सन्दीपको टोली भने ५ खेलमा ३ मा हार र दुई खेलमा जीत निकाल्दै ४ अंकका साथ पाँचौ स्थानमा छ ।
याे पनि पढ्नुस आइपीएलः सन्दीपसँग दिल्लीको यस्तो ‘र्‍यापिड फायर’